आइफोनको मूल्य घट्यो, किन्ने कि ? – Tourism News Portal of Nepal
आइफोनको मूल्य घट्यो, किन्ने कि ?
२७ बैशाख, काठमाडौं । नेपालमा आइफोन सेभेन र सेभेन प्लसको मुल्य पनि घटेको छ। एप्पलको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रालिले डलरका मूल्य घटेका कारण आइफोनको मूल्य घटेको जनाएको छ।
डलर बढ्नासाथ आइफोनको मूल्य पनि बढ्ने र घट्नासाथ आइफोनको मूल्य पनि घट्ने हुदाँ त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको जेनेरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रालिकी निर्देशक निकिता भिमसरियाले बताइन्। नेपालमा डलरको मूल्य अहिले १०२ रुपैयाँमा झरेको छ।
गत कात्तिक महिनामा नेपालमा आइफोन लन्च हुदाँ डलरको मूल्य १ सय ७ रुपैयाँ थियो। अहिले आइफोन सेभेन ३२ जिवीको मूल्य ८६ हजारमा आएको छ। पहिला यसको मूल्य ९१ हजार थियो। त्यस्तै आइफोन सेभेन १२८ जिवीको ९९ हजार ८ सय र २५६ जिवीको १ लाख १२ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ।
त्यस्तै मूल्य घटेपछि आइफोन सेभेन प्लस ३२ जिवी १ लाख १० हजार ५ सय, १२८ जिवी १ लाख १९ हजार र २५६ जिवी १ लाख २३ हजारमा किन्न पाइन्छ। आइफोन दरबारमार्ग र पुल्चोकमा रहेको इभो स्टोर, बबरमहलमा रहेको ओलिज स्टोरबाट किन्न सकिन्छ।
त्यस्तै निकिताका अनुसार आइफोन सिक्स ६४ जिवीको ६८ हजार, १२८ जिवीको ७८ हजार, सिक्स एस ३२ जिवीको ७४ हजार र आइफोन एसइ ६४ जिवीको ५२ हजार ५ सय पर्छ। आइप्याड प्रो ९ दशमलव ७ स्मार्ट किबोर्डको मूल्य १७ हजार ५ सय छ।